Nepali Christian Bible Study Resources - अल्फयसका छोरा याकूब र थद्देयस
» अध्ययन मालाहरू » बाह्र चेलाहरू » ८-अल्फयसका छोरा याकूब र थद्देयस
मर्कूस १५:४० मा "____________ याकूब" (मत्ती २७:५६ मा पनि पढ्नुहोस्) भन्ने व्यक्तिको उल्लेख छ। सम्भवतः अल्फयसका छोरा याकूब र सानो याकूब एउटै व्यक्ति थिए। सायद अल्फयसका छोरा याकूबलाई जब्दीका छोरा याकूबबाट छुट्टयाउनलाई उसलाई यसरी जनाइएको हो। उनी जब्दीका छोराभन्दा कम उमेरका अथवा कम कदका भएर उनलाई सानो याकूब भनिएको हुन सक्छ। तर यी हाम्रा अनुमान मात्र हुन्। बाइबलले हामीलाई प्रस्टै बताउँदैन। बाइबलले कुनै कुरो बताउँछ भने हामी त्यसमा पक्का हुन सक्छौं। यदि बाइबलले कुनै कुरा बताएको छैन भने हामीले त्यसबारे कुनै कुरा व्यक्त गर्न र कुनै निष्कर्षमा पुग्न होशियार हुनुपर्छ।
बाइबलले हामीलाई अल्फयसका छोरा याकूबको बारेमा थप कुनै कुरा बताएको छैन। उनले गरेका कामहरू वा भनेका कुराहरू को कुनै उल्लेख गरेको छैन। हामीलाई यति थाहा छ, उनी बाह्रमध्ये एक थिए"।
मर्कूस ३:१८ मा थद्देयस नाम गरेको चेलाको उल्लेख छ। मत्ती १०:३ अनुसार यस चेलाको अर्को नाम के थियो? ____________। मत्तीको यस पदअनुसार थद्देयस उनको उपनाम थियो। कतिको विचारमा थद्देयस नामको अर्थ छाती नजिकको वा "प्रिय" हो भन्ने छ। अरूको विचारमा यसको अर्थ "साहसी, सिंहको हृदय भएको" हो भन्ने छ।
यसैकारण थद्देयसले "तीनओटा नाम भएका चेला" भन्ने नाउँ कमाएका छन्! लूका ६:१४-१६ र प्रेरित १:१३ मा उनलाई याकूबका भाइ ____________ भनी जनाइएको छ। तर उनी याकूबका छोरा थिए वा भाइ, त्यो निश्चित छैन। किनकि ग्रीकमा "याकूबका भाइ" नभनीकन केवल "याकूबका" भनिएको छ। हामीलाई यति थाहा छ, यहूदा कुनै न कुनै हिसाबमा याकूबसित नाता गाँसिएका थिए। कि त उनी याकूबका भाइ थिए कि त उनका छोरा। लूका ६:१५ मा पनि उस्तै वाक्यांश पाउँछौं:
पद १५ "अल्फयसका याकूब"
पद १६ "याकूबका यहूदा
(साथै लूका ३:२३ देखि शुरू हुने वंशावलीमा पनि हेर्नुहोस्)। सम्भवतः यी पदहरूले याकूब अल्फयसका छोरा हुन् अनि यहूदा याकूबका छोरा हुन् भन्ने कुरा बताउँदैछन्। याकूब उनका पिता थिए। यदि यो सही हो भने यिनी नयाँ नियमको अझ अर्को "याकूब" हुने भए!
थद्देयस/लेब्बेयस/यहूदा को नयाँ नियममा अर्को एक पटक मात्र उल्लेख छ — यूहन्ना १४:२२ मा। यहाँ "इस्करयोती होइन" भनेर जनाउन किन आवश्यक पर्‍यो? ____________________________ ______________________________________। येशूले आफूलाई संसारकहाँ किन प्रकट गर्नुहुन्न भन्ने कुरा यहूदाले बुझेनन् (यूहन्ना ७:३-४ पढ्नुहोस्)। यहूदाले कतिपय कुराहरू बुझेका थिएनन्, तर नबुझेको कुरा कसलाई सोध्नुपर्छ भनी उनले जानेका थिए।
यी दुर्इ मानिसका बारेमा बाइबलले बताएका जम्मै कुरा हामीले हेरिसक्यौं। यी दुई "अल्पज्ञात" चेलाहरूमध्ये थिए। उनीहरू चेलाहरूका बीच पत्रुस जस्ता अगुवा थिएनन्। अथवा यूहन्ना जस्तै विशिष्ट खालका थिएनन्। शायद उनीहरू बोल्नलाई ढिला वा प्रायः चुपचाप नै रहने खालका थिए। चारैओटै सुसमाचारका पुस्तकहरू यी दुईका बारेमा झण्डै चुपचाप छन्!
वास्तवमा भन्ने हो भने, प्रायः सबै नै "अल्पज्ञात चेलाहरू" थिए। पत्रुस र यूहन्नाको बारेमा हामीलाई धेरै थाहा छ तर उनीहरूको दाँजोमा हामीलाई अन्द्रियास र याकूबको बारेमा थोरै नै मात्र थाहा छ। फिलिपको नाउँ केवल दुई-चार ठाउँमा उल्लेख छ। बार्थोलोमाइ (नथनएल) र थोमाको बारेमा यूहन्नामा एक-दुइटा कुरा नबताइएका भए हामीलाई उनीहरूको बारेमा केही थाहा हुने थिएन। ख्रीष्टले उनलाई बोलाउनुभएको दिनको बारेमा बाहेक हामीलाई मत्तीको बारेमा अरू केही थाहा छैन। शिमोन एक जेलोतेस थिए भन्ने बाहेक हामीलाई अरू केही थाहा छैन। बाह्रमध्ये कम्तीमा ७ जना चेलाहरू "अल्पज्ञात व्यक्तिहरू" थिए।
यदि आज कसैले सुसमाचारको पुस्तक लेखेका भए, उनले बाह्रैजना चेलाका बारेमा एक-एक अध्याय लेख्थे सायद! तर सुसमाचारका लेखकहरूले त्यसरी लेखेनन्। तिनीहरूले चेलाहरूका बारेमा थोरै मात्र बताए। तिनीहरूको विषयवस्तु प्रेरितहरू नभएर प्रभु येशू ख्रीष्ट थियो। उनीहरूको मुख्य विषय ख्रीष्ट थियो। उनीहरूको आँखा धार्मिकताको घाम (प्रभु येशू - मलाकी ४:२ पढ्नुहोस्) माथि लागेको थियो अनि उहाँको चमकको दाँजोमा उनीहरूले अन्य ताराहरूलाई धमिलो देख्‍नु स्वभाविक थियो।
सबै अगुवा बन्न सक्दैनन्, पछ्याउनेहरू पनि हुनुपर्छ। बाह्र चेलाको समूह "बाह्र पत्रुसहरू" ले बनेको भए त्यो समस्याजनक हुनेथ्यो! "ठूला" मानिसका साथसाथै "साना" पनि चाहिन्छ।
हामीले यो पनि याद गर्नुपर्छ, "ठूलो" को अर्थ "परिचित" वा "देखिने" भनेको होइन। महानता के हो भन्ने बारेमा प्रभुले धेरै सिकाउनुहुन्थ्यो। मत्ती २०:२६-२७ अनुसार महान् को हुनेछ? ________________________। "दास" को अर्थ हो "सेवक""वा "नोक" अनि प्रायः नोकरहरू चिनिने, मानिने हुन्नन्। ध्यानाकर्षण गर्ने अरूहरू होलान् तर नोकरहरू केवल आफ्नो काममा व्यस्त भइरहन्छन्! पत्रपत्रिकामा साना नानीहरूको कत्तिको उल्लेख हुन्छ? "अज्ञात चेलाहरू" ले मत्ती १९:३० लाई याद गर्नुपर्छ।
परमेश्वरले विश्वासयोग्यता खोज्दैहुनुहुन्छ। पुरुष, स्त्री, केटा, केटी जो ____________ कुराहरू (जीवनका साना कुराहरूमा, जसको ख्याल कसैले गर्दैनन्) मा विश्वासयोग्य" हुन्छन् (लूका १६:१०)। लूका १:१५ ____________ को दृष्टिमा ____________।
ख्रीष्टको मृत्यु र बौरिउठाइपछि यी "अल्पज्ञात चेलाहरू" कहाँ थिए? प्रेरित १:१३ मा सिक्छौँ उनीहरू जहाँ हुनुपर्ने त्यहीँ थिए, जे गरिरहनुपर्ने त्यही गर्दैथिए। उनीहरू विश्वासयोग्य थिए! उनीहरू प्रार्थना गर्दैथिए (पद १४)। उनीहरू पवित्र आत्माको प्रतिज्ञालाई पर्खँदैथिए। उनीहरूले धेरै हल्ला गरेनन्, तर उनीहरूले परमेश्वरले चाहनुभएकै काम गरे।
« महसूल उठाउने मत्ती र शिमोन जेलोतेस
यहूदा इस्करयोती »